कतार प्रहरीमा भर्ना हुन चाहने नेपालीका लागि खुशीको खबर, कती हुन्छ तलब ? | समाचार
June 29, 2021 NepstokLeaveaComment on कतार प्रहरीमा भर्ना हुन चाहने नेपालीका लागि खुशीको खबर, कती हुन्छ तलब ?
नेपालमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा विदेश पठाउन भन्द्यै सक्रिय कतिपय म्यानपावर कम्पनीहरूले स्वीकृति नलिइकन आफूखुसी रकम उठाएर बदमासी गरेको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागले केही म्यानपावर कम्पनीमा हस्तक्षेप गरेपछि आएको यो निर्णयले धेरै नेपालीलाई राहात मिलेको छ । विभागले चैतमा सूचना नै प्रकाशित गरेर कतार प्रहरीमा भर्ना गरिदिने बहानामा ठगी हुनसक्ने भन्दै सचेत हुन सबैलाई आग्रह गरेको थियो।
कतार प्रहरीमा भर्ना हुनका लागि उमेरको हद १८ देखि ३५ वर्ष तोकिएको छ। ५ फिट ७ इन्च उचाइका पुरुषका लागि मात्र मागपत्र पेस भएको दूतावासले जनाएको छ। प्रहरीमा भर्ना भएर तालिम सकेपछि नेपालीहरूले मासिक ६ हजार कतारी रियाल अर्थात् करिब दुई लाख रुपैयाँ नेपाली तलब पाउने बताइएको छ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार कतार नेपाली श्रमिकहरूको सबैभन्दा रोजाइमा पर्ने मुलुकमध्ये एकमा पर्छ। नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२० मा भनिएको छ, “पुरुष युवा श्रमिकहरूमध्ये सन् २०१७/१८ मा मलेसिया र २०१८/१९ मा कतार बढी छनोटको गन्तव्य मुलुकका रूपमा रहेको थियो।” उक्त प्रतिवेदन अनुसार कतारमा हाल चार लाखभन्दा बढी नेपाली कामदारहरू रहेका छन्।